एकचोटी चार्ज गरेपछी ३१२ किमि गुड्ने टाटाको नेक्सन ईभी नेपाल आउदै, कति पर्छ मूल्य ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्यएकचोटी चार्ज गरेपछी ३१२ किमि गुड्ने टाटाको नेक्सन ईभी नेपाल आउदै, कति पर्छ मूल्य ?
सरकारले विद्युतीय गाडीमा बढाएको कर खारेज गरेसँगै नेपालमा टाटा मोटर्सको लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले नेपाली बजारमा उक्त गाडी नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ। भारतमा आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको टाटाको नेक्सन ईभी भारतमा २०१९ डिसेम्बर अन्तिममा सार्वजनिक भएको थियो।
नेपालमा सिप्रदी टेड्रिङले गत वर्षकै २०२० कै अप्रिलसम्म यो गाडी नेपाल आउनसक्ने बताएको थियो। तर कोरोना महामारीसँगै नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढायो। सोही कारण उक्त योजना सिप्रदीले स्थगित गरेको थियो। टाटाले भारतमा मात्रै गत अप्रिलसम्म ४ हजार ५ सय २५ विद्युतीय गाडी बिक्री गरेको छ।
महामारीको बीचमा अप्रिलमा भारतमा ७ सय ४९ विद्युतीय गाडी बिक्री हुँदा टाटा एसयूभी नेक्सन ईभीको मात्रै ५ सय २५ वटा गाडी बिक्री भए। नेक्सन ईभीमा ७ इन्चको फ्लोटिङ इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम, सनरुफ, कनेक्ट कार फिचर, प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, एलईडी डेटाइम रनिङ लाइट, १६ इन्चको डायमन्ड कट अलोय ह्विल, अटो हेडल्याम्प, रेन सेन्सिङ वाइपर लगायतका फिचरहरु छन्।
तिनमा ईभी एक्सएम, एक्सजेट प्लस र एक्सजेट प्लस लक्जरी रहेका छन्। टाटाले ब्याट्रीमा ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किमिसम्म वारेन्टी दिएको छ। गाडीको ३ वर्ष वा १ लाख २५ हजार किमिसम्म वारेन्टी दिएको छ। भारतमा नेक्सन एसयूभी ईभीको मूल्य १३ लाख ९९ हजारदेखि १६ लाख ४० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म रहेको छ।
नेपालमा पेट्रोल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा सरकारले कम कर लगाउँदै आएको छ। गत वर्ष सबै गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको सरकारले अब १०० किलोवाट मोटर भएका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने भएको छ।
मोटर १०० देखि २०० किलोवाट भए १५ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ। मोटरको पिकपावर २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीको लागि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप र भ्यानमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
टाटाको ईभी नेक्सनमा भन्सार १० प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर, भारत–नेपाल ढुवानी खर्च र डिलर कमिसन लगायत जोडेर मूल्य निर्धारण हुनेछ। सिप्रदी ट्रेडिङले नेक्सन ईभी भित्र्याउने बताए पनि मूल्य कति हुने सार्वजनिक भने अझै गरेको छैन।
बुद्धभूमिको आईपीओ बाँडफाँट, ७४ हजार ४ सय जनाले पाए १० कित्ता सेयर
कमजोर बन्दै डलर, बलियो बन्दै नेपाली रुपैयाँ
१.७६ % ले घट्यो नेप्से, २० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट
पेट्रोलपम्पमा कार्यरत सहायक निरीक्षकको कमाई एक करोड